တစ္ဆေကဖီး: March 2010
Posted by mgphonemyint at 2:11 PM No comments:
Posted by mgphonemyint at 4:38 PM No comments:
သုံည တစ် နှစ် သုံး လေး ငါး ခြောက် ခွန် ရှစ် ကိုး
မအေ _ိုး...ကိန်းဂဏန်းတွေ။ ။
Posted by TH03HT4N3 [aNTIMa] at 1:18 PM No comments:
သူ / He
Run off as quickly as they can
Vasko Popa (from UNRESTED-FIELD, 1956)
လက်၊ ခြေ ဒါမှမဟုတ်
သူတို့ရဲ့ လက်၊ ခြေ
ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုကို ပြန်တွေ့ကြတယ်
ဘာမဆို တစ်ခုခု ရှိနေသေးသ၍။
၂ဝ၁ဝ မတ်လ ၂၁ရက် ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့အခမ်းအနားတွင် "ကဗျာနှင့်သက်ဆိုင်သူများ၏အသံ" ကဏ္ဍ၌ ဆရာဇော်မောင်၏ ကဗျာသရုပ်ဖော်ပုံသရုပ်ပြရေးဆွဲခြင်းအစီအစဉ်မှ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by TH03HT4N3 [aNTIMa] at 9:25 AM No comments:
တစ်ယောက်က ဒီမြို့ရဲ့ပထမဆုံးတော်လှန်ကဗျာဆရာ၊ မင်းတို့လည်း လက်ပန်းမကျမှီရေးထား။ တစ်ယောက်က ရိုးမတွေပင်လယ်တွေဖြတ်နေကျပေါ်တီကယ်ဘေ့ (ပေါ်လ်တီကယ်လ်ဘေ့စ်ဟုမဖတ်ရ) နဲ့ငါ့စာရေးသက်အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ ရန်ကုန်မဂ္ဂဇင်းကြီးတွေမှာ ပါနေကျအပြင် မောင်သွေးသစ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးဖြိုးထိန်နဲ့ ကျောချင်းကပ်ပါဖူး လေထန်ကုန်းမှာကိုကောက်တို့ အုပ်စုရဲ့ မတ်တပ်ထရပ်နုတ်ဆက်ခြင်းခံရတယ်။ တစ်ယောက်က ဘယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ် ဘုရားသခင်၊ဘယ်စားစရာဖြစ်ဖြစ် ပေါင်မုန့်၊ ဘယ်သူဌေးဖြစ်ဖြစ်မြေခွေး၊ ဘယ်ကလောင်ခွဲဖြစ်ဖြစ် ‘ရက်’အင်းဒီးယန်း(ရဲ့ထ်အင်ဒီးယန်းဟုမဖတ်ရ) ကိုယ်ဘာရေးရေးအိန်စပလဲစင်းနစ်နဲ့ ရေးတယ်။ တစ်ယောက်က ကျွန်တော်လ၀န်းသဒ္ဒါ မိသားစုက အတိုက်အခံလုပ်ချစ်သူများနေ့အမှတ်တရ ကဗျာစာအုပ်ဦးဆောင်ထုတ်ဝေခဲ့တယ့်
ကျုပ်စာပေလောကက သုံးနှစ်နားမယ်။ တစ်ယောက်က ကျွန်မခင်မိုးစက်ပါ၊ ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားတွေစုထုတ်တဲ့ကဗျာစာအုပ်မှာ အမှာစာရေးရတယ်၊ မဂ္ဂဇင်းကဗျာတွေလိုက်ဖတ်စရာလိုတယ်လို့မထင်ပါ။ တစ်ယောက်က ကျွန်တော်ပီအိပ်ခ်ျဆဲဗင်းကဗျာရေးရမလွယ်မှန်း သိပါပြီ။ တစ်ယောက်က ကဗျာတော့မပါသေးဘူး ဒါပေမယ့် ဇေယျာလင်းတို့မောင်ယုပိုင်တို့မှားနေတာ ထောက်ပြရမှာပဲ၊ နှစ်သက်ဆိုတာ ကျွန်မပဲ ဟင်းဟင်းဟင်း ကျွန်မက နှစ်သက်မဟုတ်ပါဘူးခွိခွိခွိ။
တစ်ယောက်က လောကဓံအာရုံကြောရောဂါကြောင့် ကဗျာဖက် မလှည့်ဖြစ်တော့တာ။ တစ်ယောက်က ၀ိပဿနာဖက်ရောက်သွားလို့ မရေးဖြစ်တော့ပေမယ့် ဒေသစာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ တော့ဝင်ထားတယ်၊ ဘယ်သူမှလုပ်သူမရှိရင် ကဗျာအယ်ဒီတာနေရာ ကိုယ်ကိုထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်က ဒီမြပုလဲမြေမှာ ကျွန်တော်ဟာဗလငါးတန်စလုံးပြည့်စုံသူ၊ ကဗျာဆိုတာ ကာရန်နဘေနဲ့ရေးရမယ်။ တစ်ယောက်က တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်တော့ မြိတ်မဂ္ဂဇင်းရှေ့တန်းကဗျာမှာ ပါပါတယ်၊ကျန်ချိန်တွေမှာ ကဗျာဟာထမင်းမစားရပါ။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ဂျူးနဲ့တော့ရင်းနှီးပါတယ်မိသားစုနဲ့ ဖြစ်သွားရင် အဲဒါတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကွ။ တစ်ယောက်က မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ) နဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေ။ တစ်ယောက်က အားပေးတယ် ကိုယ်တိုင်တော့ မရေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ တစ်ယောက်က ကဗျာဆရာဖြစ်ခဲ့တာတောင် ရှက်တယ်။ တစ်ယောက်က ဥပမာ ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတာ မြို့သစ်မှာ မီးသွေးလျှောက်ရောင်းသလိုပေါ့ဗျာ ဒါနဲ့ မြေချစ်သူဆိုတာ ကလောင်သစ်လား။ တစ်ယောက်က အခုငါ တောကျောင်းဘလော့မှာ ကဗျာတွေတင်ထားတယ်၊
နေ၀ိုင်ဝိုင်ဆိုတာ ကဗျာဆရာတခါတလေဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ဆဲပါပဲ။ တစ်ယောက်က အရူးချီးပန်းအယ်လ်ပီ၊ ဇေယျာလင်းအရေးအသားလိုမိန်းမ၊ အခုပို့စ်မော်ဒန်သည်မကောင်း၊ တော်ကြာ ပို့စ်မော်ဒန်သည်ကောင်း၏၊
နီယိုခေတ်ပေါ်ကဗျာကြေငြာစာတမ်းနှင့်ဝေဖန်တုံ့ပြန်မှုများကို ဂရုစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း(ရုတ်တရက် မောင်ယုပိုင်ကဗျာတွေ ခံစားလို့မရဘူးဟုပြောသည်-ပိုင်ဆောင်းပါးမှ)။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်းအပြင် ‘၀ိုင်’လိုမူးပြီးအပြောက’ချို’တယ်။ တစ်ယောက်က သွေး(စစ်ကိုင်း)ကို အချဉ်များမှတ်နေလားမသိဘူး ဟင်းဟင်း။ တစ်ယောက်က မြို့ လည်သို့ထွက်လာသည်၊ လူတွေရှုပ်သည်၊ ခိုတွေပျံသည်၊ ထိုကြောင့်လူတွေ ဘ၀ကြီးအားငြီးငွေ့မိသည်ဆိုရင် ကိုယ့်စကားပြေကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီ။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်းထက်နည်းနည်းသာသယောင် ကဗျာပြောင်းပြန်ထုတ်တယ် ပြီးတော့ ကလေးကဗျာရေးတယ်။ တစ်ယောက်က သစ်ချင်တယ် လက်ကိုပြောင်းလို့မရဘူး ဘိုဟီးမီးယန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ တစ်ယောက်က ဘာရေးရေး လူသေကောင်တွေ ခေါင်းပြတ်တွေ
ငရဲခန်းနမိတ်ပုံတွေနဲ့ ‘မန်းနီး’ကဗျာနဲ့ဆုငွေရတဲမန်းနီးကြိုပန်လှုခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်က အေးအေးဆေးဆေးလမ်းပေါ် ဘာသာရေးအသိလေးယှဉ်တွဲရေးတယ် ဒါနဲ့မောင်ချောနွယ်ဆိုတာဘယ်သူလဲ။ တစ်ယောက်က ပထ၀ီအနေထားအရ သုံးဆယ်သုးံ လမ်းဟာ ခေတ်မရှိတော့ဘူး၊ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမပြောချင်လို့ ကဗျာရေးတာ။
တစ်ယောက်က ဘာရေးရေးနိုင်ငံရေးပါရမည်ငါးမည်ရကဗျာဆရာ၊ မင်းဆရာဇေယျာလင်းက အရေးအသားတွေပြီးရင် အတီးအမှုတ်တွေလာဦးမလား ဟားဟားဟား။ တစ်ယောက်က အဆောက်အဦးလွန်ဝါဒီများ၏လုပ်နည်းကိုင်နည်းရေးရင်း အလျဉ်းသင့်ပါကအယ်လ်ပီကိုရှင်းပါမည်၊ ပို့စ်မော်ဒန်အကြောင်းသီးသန့်ရေးပါဦးမည်၊ပို့စ်မော်ဒန်ကို ရှင်းလင်းရသော် ဏ္ဍဋ$%ဂ ဟုယူဆသည်။ တစ်ယောက်က တစ်ထောင့်တစ်ညကွန်ဆက်ကျူရယ်ကဗျာသီအိုရီ ရှေ့လဆက်ပါဦးမည်။ တစ်ယောက်က ခုနစ်ဆယ်ငါးကြိမ်မြောက်ပြောသည် ‘မြင်းစိုင်းသူများ’ စာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်သုးံ ဆယ်ကလုပ်ခြဲ့ခင်းဖြစ်သည်’ ‘ယနေ့ကဗျာသေပြီ’။ တစ်ယောက်က ရောက်လေရာမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ် ပုံသဏ္ဍာန်ကို အဆန်းတကာ့အဆန်းဆုံးဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်တယ်။ တစ်ယောက်က သဘာဝနဲ့သဘာဝ ကိုဘိန်းတီးခပ်၊ပလပ်စတစ်အကြည်သားပေါ် ကဗျာစာလုံးစတေကာတွေကပ်၊ အခုလည်း စားသောက်ဆိုင်ကဘောင်ချာကို ကဗျာလုပ်ကြည့်ထားတယ်။ တစ်ယောက်က ရော့ခ်အယ်လ်ဘမ်မှန်ရင် ငါ့မှာအကုန်ရှိတယ်၊ လက်ရွေးစင်ကဗျာစာအုပ်မှာမပါလည်းမပါဘူး မပါလည်းမပါချင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်က ကဗျာဆုအမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကွက်တိ အဖဘုရားသခင်အောင်ဆန်း ငါက ဘတ်စ်ကားထဲမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀ကိုစာနာတဲ့ခေတ်ရဲ့ကြေးစားပါ။ တစ်ယောက်က မိုးများရွာသွန်းပြီးနောက် အရက်ခွက်ကိုဆောင့်ချ၍ အာလေးလျှာလေး ဖြင့်အော်သည် ‘တော်တော့’။ တစ်ယောက်က စိတ်ကူးချိုချိုနဲ့ လူရှေ့မှာဖရဲသီး ကိုဓါးနဲ့အမြဲခြွဲပရပါတယ်။ တစ်ယောက်က လမင်းငွေ့ရည်ရေတံခွန်ပျံကျသိုဝှက်ညဆိုတာ အောင်ဇင်မင်းဟန်ပေါ့။ တစ်ယောက်က နှင်း ရည်စက်လက် ရှုမျှော်ခင်းနဲ့ပဲ ဆက်ကတယ်။ တစ်ယောက်က ပြည်ပရောက်အပျော်စီးပင်လယ် ဘဲကြီးတွေပါဝါလာလာသုံးတာ မုန်းတယ်။ တစ်ယောက်က နာနာဘာဝစာအုပ်ရေးခဲ့တဲ့ ခ-အ-အ မြန်မာပိုအက်ထရီဖေါင်ဒေးရှင်းဘလော့ စလုံးကနေ စလုံးရေးစနေတယ်။ တစ်ယောက်က ဘယ်သူရေးတဲ့ကဗျာမှ ကဗျာလဲမေးတဲ့ ရေးသူ-လမ်းဆူ။ တစ်ယောက်က ပဲ့တင်မဆုံး ပါကေးနဲ့ကဗျာတွဲထားတယ် မုန့်ပြဲတယ်နည်းပေါင်းစုံစမ်းသပ်တယ်။ တစ်ယောက်က နှစ်ကာလများမှာ နှစ်ကာလများစွာ သူပဲအကြမ်းသူပဲအချော။
တစ်ယောက်က ရုရှားကဗျာမိတ်ဆက် အက်ရှဘရီနိဒါန်းနှင့် အယ်လ်ပီနှင့်အခြားကဗျာဗေဒများ ကဗျာဘ၀ရှာပုံတော်ဖွင့်တယ်။ တစ်ယောက်က ကဗျာမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် ရီရယ်လစ်ဇင်ပြီး ဆာရီရယ်လစ် ပြီးရင် ရီရယ်လစ်ဇင်ပြန်လာမယ် ဒါပေမယ့် အရင်ရီရယ်လစ်ဇင်မဟုတ်တော့ဘူး အဲဒီလိုရက်စက်သောဂီတနဲ့နောက်ဆုးံ ကျန်တဲ့သစ်ရွက်အရှင်မောင်ကြိုးစား။ တစ်ယောက်က အပိုလျှံရှိတဲ့နေ့ကနေ အခုန်နဲ့အခုတောင်ပေါ်ရောင်စဉ် ဓါးဂိမ်းရောက်လာ။တစ်ယောက်က လူငယ်တွေပဲအားကိုးရမှာ ကျန်တဲ့အချိန်ပိတောက်ပွင့်သစ် မျက်နှာဖုံးရှင်လူကြီးတွေကို လိုက်ရှာ မိုးရာသီရောက်တိုင်း ကဗျာတစ်ပုဒ်ရတယ်။တစ်ယောက်က အစိမ်းကြီး ဥပမာ-မောင်ယုပိုင်ကဗျာတွေဆို တစ်လုံးမှနားမလည် ကျုပ်တို့ပျဉ်းမနားက မှိုမဟုတ်ဘူးမျှစ် ယူရေနီယံစစ်စစ်တွေပဲထွက်တယ်။တစ်ယောက်က နွားကျောင်းသား မြန်မာစာဟာဧက၀ဏ္ဏဖြစ်တာကြောင်အယ်လ်ပီရေးလို့မရနိုင်။ တစ်ယောက်က မေး-အယ်လ်ပီကဘယ်လြိုမင်သလဲ။ တစ်ယောက် ဖြေ-အယ်လ်ပီဟာအနောက်ပုံတူကူး/ စကားလုံးအမှိုက်ပုံ/ပညာတတ်လုပ်ဇာတ်/အရူးချီးပန်း/စကားလိမ် ဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်က မေး-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က်ဖြေ-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က မေး-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ဖြေ-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က မေး-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ဖြေ-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က မေး-၎င်းင်း။တစ်ယောက်က ဖြေ-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က မေး-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ဖြေ-၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်းမေး-ဖြေအပြင် ပြည်သူ့ အတွက်အသံတူအရောင်များနဲ့လှိုင်းသစ်မှာကဗျာစာအုပ်ဝေဖန်ရေးရေးတယ် အဒု အာအုပအင်အင်အအောင်းအူး။ တစ်ယောက်က ပန်းကိုအိုးထဲထိုးတော့ ပန်းအိုး ပြင်ဦးလွင်ရောက်ရင်ဝင်ခဲ့ပေါ့။
တစ်ယောက်က ပြင်ဦးလွင်မှာနှင်းဆီတစ်ရာကိုဖြုပ် စိတ်ရင်းမကောင်းသူကပိုရယ်ပြသလို ကဗျာတွေကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ် ဘီလူးကိုသွားလဲဖြဲတည်းဆိုသလို။တစ်ယောက်က သက္ကရာဇ်မျှော်စင်ပေါ်ကနေ စာရေးပေမယ့် မန်းချောင်းလရောင်နဲ့ ကိုးဆယ့်ခုနစ်လက်ရွေးစင်ကဗျာက မတက်။ တစ်ယောက်ကဂျွန်လရဲ့မိုးရေစက်များဟာ ဂျွန်လရဲ့မိုးရေစက်များသာ။ တစ်ယောက်က ယခင်ကသူစိမ်း ယခုဝိုင်းဝိုင်းပြည်ြ့ပည့်များများမြန်မြန်။ တစ်ယောက်က နာဂစ်အတွက်ကိုရွေး။တစ်ယောက်က လူဖြစ်ရတာကောင်းတယ် နေမျိုးကြီးကဗျာတွေ ဖတ်ချင်ဖတ်။ တစ်ယောက်က အမိမြန်မာပြည်မှအမေအား သား(အောင်ဝေး) အဝေးမှအားပေးနေမည်။တစ်ယောက်က အထီးကျန၊် ကင်းကွာ၊မြို့ပြစိတ္တဇ၊စိမ်းခြင်း၊နာကျင်မှု။ တစ်ယောက်က အရောအနှောနှင့်သရော်ခြင်း မေးခွန်းထုတ်ြခင်း အထက်အောက်ဖိစီးမှု ဘေးဖယ်ထုတ်ခံရမှု အင်စတီကျူးရှင်းလွမ်းမိုးမှု စာပေဆိုတာဘာလဲနှင့်ပို့စ်မော်ဒန်လောကအမြင်။ တစ်ယောက်က(သြစတေးလျ) ကျွန်တော် လမ်းပေါ်ကလူပါ ဂျွိုက်စ်နှင့်ကာဖကာအရေးအသားများ ဘာသာပြန်ရှင်းလင်းသည် ဒါပေမယ့်နားမလည်တာက အယ်လ်ပီဆိုတာ အောင်ဇင်မင်းကဗျာမျိုးလား။
တစ်ယောက်က အင်တာနက်ကဗျာဆရာ။ တစ်ယောက်က အွန်လိုင်းကဗျာဆရာ။ တစ်ယောက်က ဘလော်ကာကဗျာဆရာ။ တစ်ယောက်ကလွပ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ရလို့။ တစ်ယောက်က ရေးချင်၍ရေးသည် ဖတ်ချင်မှဖတ်။ တစ်ယောက်က မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ မလွတ်လပ်လို့။ တစ်ယောက်က မဂ္ဂဇင်းမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြလည်းမခံဖူး မခံလည်းမခံချင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်က အန်ဒါဂရောင်းကဗျာဗျ။ တစ်ယောက်က မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်က အဟောင်းတွေသယ်မလာနဲ့။
တစ်ယောက်က ငါ့စာမျက်နှာပေါ်မှာဘာလာရှုပ်နေတာလဲ သားကြီး။ တစ်ယောက်က ထိုနေ့သည် မနေ့ကလို နေ့တစ်နေ့ဖြစ်၍ နေ၀င်သော် နောက်တစ်နေ့၌လည်းထိုနေ့လို နေထိုင်ြပီး နေ့ နေ နှေး .....။ တစ်ယောက်က အပြာကဗျာအားဆန့်ကျင်ကြ။ တစ်ယောက်က မဂ္ဂဇင်းရေစီးပေါ်က မေမေရေ ညီမလေးထားရစ်ခဲ့တဲ့ခေတ်ပေါ်စိတ္တဇငါတို့ဘ၀နဲ့ပဲ။ တစ်ယောက်က ကျုပ်ကလွဲလို့ အကုန်စောက်ရူးတွေ စောက်ပေါတွေချည်းပဲ။ တစ်ယောက်က ဟိုင်း နေကောင်းလား
ဒါကျွန်တော့်ဘလော့ပါခင်ဗျား)း(း)) အဟိ ခွိ ဟဟ။ တစ်ယောက်က နာမည်ကြီးချင်လို့ကဗျာရေးနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ တစ်ယောက်ကကျွန်မအရေးအသားကလူများနဲ့မတူ လူတွေဝေဖန်တြုံ့ပန်တာကျွန်မအလုပ်မဟုတ်ဘူး ရှင်။ တစ်ယောက်က ဘလော်ကာကဗျာဆရာဗျ ဘာထင်သလဲ။ တစ်ယောက်က၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။ တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။တစ်ယောက်က ၎င်းင်း။
(တစ်ယောက်က မောင်ချောနွယ်) (တစ်ယောက်က ဖော်ဝေး) (တစ်ယောက်က မြေချစ်သူ) (တစ်ယောက်က မောင်လေးအောင်)
Posted by mgphonemyint at 8:47 PM No comments:
စိတ်တိုင်းကျ စစ်ပါဆေးပါ ပြီးမှပြန်လွတ်ပါ
နယ်စပ်တွင် ခြေရာခံရင်း တော်လှန်ကဗျာ တစ်ပုဒ် အစပျောက်လျက်ရှိ။
ရဲဘော်အားလုံး အထူးသတိရှိရန်လို။ တော်လှန်ကဗျာသည် တွေ့တွေ့သမျှ
တော်လှန်ဖို့ အမြဲစိတ်ထက်သန်။ မှန်ဘီလူးတစ်လက်နှင့် ပုံကြီးချဲ့တက်။
အာပြဲသလို ခြေလည်းသွက်။ မထင်ရင် မထင်သလို အလစ်ဝင်ရောက် လှုပ်
ရှားတတ်။ အထူးထင်ရှားသည်မှာ နီနီရဲရဲများကို ခုံမင်တပ်မက်။
လှောင်အိမ်ထဲမှ ညစ်ညမ်းကဗျာတစ်ပုဒ် မြို့ထဲသို့ လွတ်သွား။
မြို့နေလူထု အထူးသတိချပ်ရန်။ ညစ်ညမ်းကဗျာသည် ရမ္မက်အလွန်
ကြီးမား။ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အကွက်ကျကျ စီမံသည့်နေရာတွင် တစ်ဖက်ကမ်း။
အထူးသဖြင့် မြန်မာ့မျိုးဆက်သစ် သမီးပျိုများ ညစ်ညမ်းကဗျာ၏ တော့ကင်တွင်
မမျောသွားရန် လိုအပ်။ အထူးထင်ရှားသည်မှာ အမြဲစိုရွှဲလျက်။
အထူးကန့်သတ်ဇုန်မှ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတစ်ပုဒ် ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိ။ မြေပေါ်
မြေအောက်လောကသားများ အထူးသတိဝရိယထားရန်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာသည်
အကြမ်းဖက်လိုဟန်ရှိ။ ပိုက်ဆံရှိသော သူများ၊ ချမ်းသာသောသူများကို
အလကားနေရင်း မျက်မုန်းကျိုးနေ။ အုပ်စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတတ်။ အထူးထင်ရှား
သည်မှာ အမြဲတမ်း အရက်နှင့်ဗိုက် ဆာလျက်ရှိ။
မိဘကျေးဇူး ဆပ်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ အမျိုးသားစာပေ ကြိုးစင်ပေါ်က ကဗျာနဲ့
ပြည်သူတွေထမင်းငတ်နေပြီ အမှန်ပဲ နှိပ်စက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့ အမေရိကန်ထုတ်
ဟန်ဘာကာ ဟော့ဒေါ့ ချောကလက်ကဗျာတွေကိုတော့ ကြုပ်ကြပ်သာလိ လိုက်ပါတော့။
Posted by TH03HT4N3 [aNTIMa] at 12:39 PM No comments:
ကလေးတွေ စာကျက်နေကြသည် ။ အသံစာစာနှင့် အလွန်သာယာ၏ ။ အစားအစာဝါးစားပါ ။ အသားပါသလား ။ ငါးပါသလား ။ ဖတ်စာထဲမှာဤသို့ပါ၏ ။
၁/ စိန့်ဂျွန်ဆင် ST .JOHNSON ကျားဝတ်အင်္ကျီ၊ အင်္ဂလန် နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည် ။ ချုပ်ရိုးချုပ်သား သေသပ်လှပ်သောကြောင့် ၊ အချိုးကျပြီး ကြည်ရှည် ဝတ်နိုင်သည် ။ ရောင်းဈေး ကျပ် တသောင်းရှစ်ထောင် ။
၂/ ရက်ဗလွန် REVLON နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေး ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံလုပ် ၊ တမိနစ် အတွင်းခြောက်သည် ။ တနေကုန် ခံသည် ။ ဗီတာမင် အီးပါ၍ နှုတ်ခမ်းများမပျက်စီး ၊ တန်ဖိုး ကျပ်လေးထောင့်သုံးရာ ။
၃/ ပင့်ဟောက် PINK HOUSE မဝတ် အင်္ကျီ၊ ထိုင်းနိုင်ငံလုပ် ၊ ဒီဇိုင်းစုံ ၊ရောင်စုံ ၊ ရောင်းဈေး ကျပ်သုံးထောင် ။
၄/ ဟန်းတင်း HANG TEN ရှပ်အင်္ကျီ၊ တန်ဖိုးကျပ် သုံးထောင်ရှစ်ရာ ။
၅/ ပုလစ်(စ) POLICE နေကာမျက်မှန် ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံလုပ် ၊ နောက်ဆုံး ပေါ်ဒီဇိုင်း ၊ ရောင်းဈေး ကျပ် နှစ်သောင်းလေးထောင် ၊
၆/ MX 102 SODA ခါးပတ်အိတ် ၊ တန်ဘိုး ကျပ် နှစ်ထောင့်သုံးရာ ၊
၇/ အေလိယန်းဝပ်ရှော့ ALIENS WORKSHOP ဂျင်းဘောင်းဘီ ၊ ရောင်းဈေး ကျပ်လေးထောင့် ရှစ်ရာ ။
၈/ စကတ်ရှာ SKECHERS ကျားစီးဖိနပ် ၊ တန်ဖိုး ကျပ် နှစ်သောင်းလေးထောင် ။
၉/ နီကေ NIKE လျှာထိုး ဦးထုပ် ၊ ရောင်စုံ ၊ တန်ဖိုး ကျပ် နှစ်ထောင့်ရှစ်ရာ ။
၁၀/ ဘီးယင်း BEING ကော်လာပါ ၊ ဇစ်တပ် ၊ မဝတ်စပို့ရှပ် တန်ဖိုး ကျပ် လေးထောင့်သုံးရာ ။
၁၁/ ခရေးဇီး CRACY စကတ်ရောင်စုံ ၊ တန်ဖိုး ကျပ် သုံးထောင့်လေးရာ ။
၁၂/ မီလန်MILAN မစီးဖိနပ် ၊ တန်ဖိုး ကျပ်သုံးထောင့်ခြောက်ရာ ။
၁၃ / အိုမီဂါ ဆီးမာစတာ OMEGA SEAMASTER ကျားဝတ်လက်ပတ် နာရီ ၊ တန်ဖိုးကျပ် နှစ်ဆယ့်ခြောက်သိန်း (၂၆၀၀၀၀၀ တိတိ) ။
၁၄ / ရာဒို RADO လေးထောင့် ၊ အပြာရောင် မဝတ် လက်ပတ် နာရီ ၊ တန်ဖိုး ကျပ်ဆယ့်နှစ်သိန်း (၁၂၀၀၀၀၀ တိတိ )
၁၅/ ပြောင်ခေါင်းစိမ်း ဝမ်းဆက် ၊ အလေးချိန် ၈၇.၅၈ ဂရမ် ၊ အလျှော့တွက် ၇ပဲ ၊တန်ဖိုး ကျပ် ရှစ်သိန်းခြောက်သောင်း ( ၈၆၀၀၀၀ တိတိ )
၁၆ / စိန်နှင့်မြိတ်ပုလဲဆွဲသီး . . . ၊တန်ဖိုး ကျပ်သုံးသိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင်
၁၇/ နီလာနှစ် စိန်တစ်ပွင့် FANCY နားကပ် ၊ တန်ဖိုး ကျပ် တစ်သိန်းရှစ်သောင်း ။
၁၈/ စိန်ကိုးပွင့် ရေလှိုင်းပုံ လက်စွပ် ၊ တန်ဖိုး ကျပ် သုံးသိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင် ။
၁၉/ ဖဲပြားမီးပုံးနားဆွဲ ၊ လေးသောင်းနှစ်ထောင်ကျပ် ။
၂၀/ ယပ်တောင် ဘောလုံးနားဆွဲ ၊ လေးသောင်းတစ်ထောင်ကျပ် ။
ကလေးတွေ ဘယ်သွားကုန်ကြပြီလဲ ၊ စာကျက်သံလဲ မကြားရ ။ တိတ်ဆိတ်လို့ ၊ အစားအစာ ၊ ဝါးစားပါ အသားပါသလား ၊ ငါးပါသလား ။
၁/ ဇီယာဆန် တစ်ပြည် ၂၀၀ /-နှစ်ရာကျပ်
၂/ပဲတောင့်ရှည် ၂ စည်း ၅၀/- ငါးဆယ်ကျပ်
၃/ ငါးပိရေကျို၁၀ါး ၆၀/- ခြောက်ဆယ်ကျပ်
၄/ ချဉ်ပတ်စုံတို့စရာ ၂၀/- နှစ်ဆယ်ကျပ်
၅/ ဘဲဥ တစ်လုံး ၅၀/- ငါးဆယ်ကျပ်
စုစုပေါင်း ညနေစာဈေးဘိုး သုံးရာရှယ်ဆယ်ကျပ် (၃၈၀-/)
( MILETUS ဝတ္ထုတိုစု ၊ ဩဂုတ်လ ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် )
Posted by mgphonemyint at 10:52 PM No comments:
လိမ္မာရင် အားလုံး မင်းဖို့ ချည်းပဲ
ငါခု ဒီမှာ ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာထားတယ်
သွေးကြောထဲ ငါးတွေနွေးပြီလားက မင်းဟာမင်း စဉ်းစားပေါ့
ကြက်နဲ့ ကြက်ဥကိစ္စ ဘယ်သူမှရေးကြီးခွင်မကျယ်ကြဘူး
ငါ့စကား ငရဲဆို ဂျိုကာနဲ့လို့ မြဲမြဲမှတ်ထား
ဘဝင်လေဟပ်ပြီး ချဉ်ဖတ်စော်နံတဲ့မြို့တွေဆို ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာဖို့မမေ့နဲ့
မင်းရဲ့ ချစ်လှစွာသောလေးလည်း ဘယ်နှစ်ယောက်မဆိုနိုင်ဘူး
ယောက်ျားတစ်ယောက်က ကိုယ့်ထွက်ပေါက်ကိုယ်သိဖို့လည်း လိုတာပေါ့လေ
လောကမှာ ရှည်လို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေက လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်ကွာ
အဲဒီကောင်တွေက မထင်ရင် မထင်သလို သစ်စိမ်းချိုးတတ်တော့
၂ဝ၁ဝ မတ်လ ၁၃ရက်
Posted by mgphonemyint at 7:58 PM No comments:
အကြွေစေ့ကလေးများအတိုင်း ပွန်းလေ ပြောင်လေ
နေပူသလိုလို မိုးရွာသလိုလို နှင်းဖွဲဖွဲလမ်းကလေးအထဲ
နီးသောအခါ ဝေးသွားလိုက်၊ ဝေးသောအခါ နီးသွားလိုက်
၂ဝ၁ဝ မတ်လ ၁၁ရက် ည ၁ဝးဝ၄
Posted by TH03HT4N3 [aNTIMa] at 11:56 AM No comments:
* သူငယ်ချင်းချိမ့်ကြီးရဲ့ ကဗျာအတွဲတွေဖြစ်တဲ့ တေးများ ၊ ပြဇတ်မင်းသား ၊ ပုံပြောသူ စတာတွေကို ဖတ်ရှုပြီး အားကျတဲ့ စိတ်နဲ့ "ရှုခင်းများ" ကိုရေးဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုဖော်ပြလိုက်တဲ့ ကဗျာတွေဟာ အဲ့ဒီအထဲက တချို့ ပါပဲ ။
အာရုံငါးပါး အပြင်ဘက်က ကဗျာဆရာတွေမှာသာ ရှိတတ်တဲ့ ဆဌမအာရုံကို အားပြုပြီး ရေးဖွဲ့ထားပါတယ် ။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရှုခင်းများ ဖြစ်နေတာဟာ အမှတ်မထင် သတိရဖွယ်ပါပဲ ။
ခပ်ပုပုလူတွေ ထိုင်လို့ ။
သူတို့ . . . .
ရှုခင်းများ ( ၂ )
တိမ်တွေ . . .
အိုး . . . သက်တန့်ငဲ့
ဂျုးရဲ့ တိမ်နှင့်ချည်သည့်ကြိုးလား ။
ရှုခင်းများ ( ၃ )
ဆပ်ကပ်ကမ္ဘာကြီးဟာ ပျော်စရာ ။
ရှုခင်းများ ( ၄ )
ပင်လယ်ဟာ . . . ။
ကမ်းခြေမှာ . . .
ရှုခင်းများ ( ၅ )
အများနဲ့ တစ်ယောက်လည်း သူပဲ နိုင်တာပဲ
ယုတ္တိဗေဒတွေ ဘာတွေ ဘေးဖယ်ထား
ဒါက ကောင်းဘွိုင်ကား ။
သေနတ်ပစ်မလွဲရင် ပြီးတာပဲ ။
တစ်ပြားမှ မလျှော့ဘူး ။
ရှုခင်းများ( ၆ )
ရှုခင်းများ ( ၇ )
ဟောဒီမှာ . . .
ရန်ကုန် . . .
Posted by mgphonemyint at 7:20 PM No comments:
သံနဲ့လုပ်ထားလျက် ဝေကျလာသော ဂဃဏန
ဆူဆိုဒ်လုပ်တာမဟုတ် ။ မဟုတ် ။ လုံးဝမဟုတ်
လုံးဝ ( လုံးလုံးဝဝ ) မဟုတ် ။
အရက်သောက်နေတာပါ ။ အရက်သောက် နေတာ
အရက်ကိုသောက်နေတာ ။ အရက်ကို ဒီလို
ရင်ဘတ်မြည်ဟီး စည်ကြီးတီးလို့ ဒီလို
တရစ်စိန်တရစ် မြတရစ် သိကြားတရစ်
လူပြည်သူအများ တရစ် ဗောဓိညောင်တရစ်
ရုပ်လုံးပေါ် ။ ခရစ်စတယ်ဘောစခ ရင်ထဲမှာ ပေါ်
ဖော- အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအတွင်း သွေးထွက်ခြင်း
ဖောဖော - ခြေဖဝါးမို့မို့မောက်မောက်
ပင့်ကူ လက်တံတွေ လှုပ်ခတ်
'ရှော' ဘိုင့်ဘိုင့် ။ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကျန်ရစ်သူတွေ
တပတ် တစ်လ လွမ်းဘို့ မောပန်းသွားပြီ ။
မတ်သနော အပြည့်တင်ဆောင်လာသော ဟူးမင်းန်းဗိုက်ဗုံးကြီး
ကားတွေစီ အမြန် သုတ်ခြေတင်ကြလေပြီ ။)
ရှေ့မှာ နောင်မှာ အရင်ကတည်းက
အတိအကျ ၊ ဟုတ်ရဲ့လားကွ သံဝေဂ
Posted by mgphonemyint at 9:30 PM No comments:
Posted by mgphonemyint at 3:16 PM No comments: